नौ महिनामै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या दोब्बर, के हो डिम्याट खाता, क’सरी खोल्ने?
Homeसमाचारनौ महिनामै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या दोब्बर, के हो डिम्याट खाता, क’सरी खोल्ने?
April 3, 2021 admin समाचार 5478
हाल डिम्याट खा’ता खोल्नेहरु ह्वात्तै बढेका छन्। सिडिएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार यस्तो खाता खोल्नेको संख्या ३२ लाख ७२ हजार पुगेको छ। यद्यपि कतिप’यले दुई खाता खोलेका हुन्छन्। यस्तो खाता दुईभन्दा बढी खोल्न भने पाइने छैन। दुईभन्दा बढी खाता खोलेमा रद्द हुने प्राव&धान छ।
असार मसान्तसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको’ संख्या १६ लाख ८६ हजार १०२ थियो। ९ महिनामै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या दोब्बर हुनुले सेयर बजारमा नयाँ लगानी’कर्ताको संख्या बढेको पुष्टि गर्दछ।
सेयर बजारबारे जति बढी प्रचार, प्रसार हुन्छ त्यति नै बढी डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या बढ्ने गरेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौ’पानेले बताए। यद्यपि कतिपयले दुई खाता खोलेका हुन्छन्। यस्तो खाता दुईभन्दा बढी खोल्न भने पाइने छैन। दुईभ’न्दा बढी खाता खोलेमा रद्द हुने प्रावधान छ।
असार मसान्त’सम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या १६ लाख ८६ हजार १०२ थियो। ९ महिनामै डिम्याट खाता खोल्ने’को संख्या दोब्बर हुनुले सेयर बजारमा नयाँ लगानी’कर्ताको संख्या बढेको पुष्टि गर्दछ।
सेयर बजा’रबारे जति बढी प्रचार, प्रसार हुन्छ त्यति नै बढी डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या बढ्ने गरेको सिडि’एस एण्ड क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए।
‘बजार बढेपछि नयाँ लगा’नीकर्ता पनि थपिन्छन्, हाल नयाँ बीमा कम्पनीसहित धेरैको आइपिओ पनि आइरहेको छ, यसले पनि डिम्याट खाता खोल्ने’को संख्या बढेको हो’ उनले सेतोपाटीसँग भने। कतिपयले प्राथमिक सेयर भर्नकै लागि पनि डिम्याट खा’ता खोल्ने गरेका छन्।
डिम्याट खाता नभए’काले प्राथमिक सेयर भर्न पनि पाउँदैनन्। दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न पनि पाउँदैनन्। कतिपयले अहिले पनि सेयर प्रमाणपत्र नै घरमा राखि’रहेका छन्।
के हो डिम्याट खाता ?
अंग्रेजी शव्द ‘डिम्या’ट्रिलाइज्ड’को छोटकरी शव्द नै डिम्याट हो। नेपालीमा यसको अर्थ अभौतिक खाता हुन्छ। विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री हुँदा पहिले भौतिक अर्थात कागजी प्रमाणपत्रकै रुपमा हस्तान्तरण हुने गर्दथ्यो।अ’र्थात सेयर बेच्नेले प्रमाणपत्र नै दिने, खरिद गर्नेले फेरि आफ्नो नाममा प्रमाणपत्र नै पाउँथे।
२०७२ माघ २ गतेबाट डिम्याट खाता पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको हो। हाल सेयर अभौतिक रुपमा अर्थात यहीं डिम्याट खातामा सिधै हस्तान्तरण हुन्छ। जसरी हामीले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्छौं, त्यसैगरी डिम्याट खा_तामा किनेको सेयर आफै जम्मा हुन्छ।
प्राथमिक सेयर (आइपिओ) भरेपछि परेमा खातामै जम्मा हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गर्दा खाताबाट सेयर संख्या घटेर खरिद गर्नेको डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छ। यही सेयर जम्मा हुने खाता नै डिम्याट खाता हो।
कसरी, कहाँ’ खोल्ने खाता?
यो खाता विभिन्न बैंकका सहायक कम्पनीहरुमा खोल्न सकिन्छ। सहायक कम्पनी भएका बैंकह’रुले नै यस्तो खाता खोलिदिन्छन्।
त्यस्तै ब्रोकर कम्पनी’हरुमार्फत पनि यस्तो खाता खोल्न सकिन्छ। यो खाता खोलिदिने संस्थालाई निक्षेप सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) भनिन्छ। ७६ वटा यस्ता निक्षेप सदस्य छन्। यस्तो खाता खोल्नका लागि बैंक खाता नम्वर, नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र फोटो चाहिन्छ। आफूले कारोबार गर्ने बैंक वा ब्रो’कर कम्पनीमै यस्तो खाता खोल्न सकिन्छ।
धेरैले यस्तो खाता खोले’वापत कुनै शुल्क लिँदैनन्। केहीले एक सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन्। डिम्याट खाता खोलेपछि तपाईंलाई १६ अंकको डिम्याट खाता न’म्वर प्राप्त हुन्छ। सो नम्वर पाएपछि मात्रै तपाईंले प्राथमिक सेयर भर्न वा दोस्रो बजार (नेप्से) बाट खरिदबिक्री गर्न सक्नेछन्।
आफ्नो डिम्याट खा’तामा कुन कुन कम्पनीको, कति सेयर छ? त्यसको अहिलेको बजार मूल्य कति छ, खातामा सेयर जम्मा भए/नभएको जस्ता विवरण पनि आफूले नै मोबाइल वा ल्यापटपबाट हेर्न सकिन्छ। यसका लागि डिम्याट खाता खोलि’दिने संस्थाले डिम्याट एकाउन्ट लगइनको युजरनेम र पा’सवर्ड दिन्छन्।
तेस्रो बिहे नगर भन्ने प्रश्न गरेपछि, के मेरो बिहे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो भन्दै अभिनेत्री श्वेता तिवारी रि’साइन्
चियावालीलाई भा’वुक सन्देश “म्युजिक भिडियो र फिल्म खेल्न तिर लाग्यौ भने तरकारिवाली र रिक्सावाला जस्तो ब’नाउछन” (भिडियो सहित)
यदि तपाईँ आफ्नो छाला गोरो र चम्किलो चाहानु हुन्छ भने आलस लगाउनुहोस्’ कसरी लगाउने हेर्नुहोस्
October 30, 2020 admin समाचार 11145
नेपालमा विशे’षगरी आल’सको तेल खाने गरिन्छ । यस्लाई मि’लमा लगेर पेला’उँदा तोरीको जस्तै तेल निस्कन्छ । तोरीको तेल कपाल र शरीरमा लगाईनु’कासाथै खानको’लागी पनि प्रयोग गरिन्छ भने आलसको तेललाई खानकोलागी मात्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
अनिता र छोरी यसरी रमाइलो गर्दै ,आहा आमा-छोरिको माया (हे’र्नुहोस् भिडियो)
June 5, 2021 admin समाचार 4947
क्यान्सर, मुटु रोगकालागी अ’चुक औषधी हो बाँसको तामा, यस्ता छन् अन्य फाइ’दाहरु
May 23, 2021 admin समाचार 5494
बाँसको तामा’को तपाईं अचार, तरकारी वा सुप, के खानुहुन्छ रु जसरी खाए पनि यो स्वा’दिष्ट त हुन्छ नै यसले मानव स्वा’स्थ्यमा समेत फाइदा पु(याउँछ ।मो सेबनले मुटुको लागी राम्रो फाइदा गर्छ ।। खासगरी, तामे, निगालो,
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241955)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229858)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229487)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228449)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227860)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227403)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226658)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226234)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194258)